ကြက်ခြေခတ်အလွမ်းနဲ့လွမ်းရပ်ရာသီ – Grab Love Story
(ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံပါသည်) သြော် ဘာလိုလိုနဲ့ ရွက်ဟောင်းကြွေလို ရွက်သစ်တောင်ဖူးနေပါပြီ နေညိုချိန်အိပ်တန်းတတ်လို့ဌက်လေးတွေတေးဆိုနေတာ ငါ့အတွက်အလွမ်းဆုတွေလား မတွေ့တာကြာလို့ နင့်ငါ့ကို သတိရရဲ့လားဟာ နင့်မရှိပဲ ငါ့ကျောင်းတတ်နေရတာ ငါ့မပျှော်ပါဘူး ခက်ခက် ရယ် နင့်နဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့ ၉တန်း အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့ ငါမှတ်မိနေတုန်းပါပဲ ခက်ခက် ရယ် စာမေးပွဲအောင်လို့ ပျှော်နေတဲ့အချိန် နင့်မျက်နှာမကောင်းလို့ ငါမေးမိခဲ့တယ် ခက်ခက် နင်ဘာဖြစ်နေတာလည်းဟာ မင်းမြတ် ငါ့အဖေ သူ့ဇာတိ မန္တလေးမှာ အခြေချတော့မယ်တဲ့ ငါ့တို့ဝေးနေရတော့မယ်ဟာ အဖိုးနဲ့အဖွါးကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ အဖေ့ကို အနားမှာလာပြောင်းနေဖို့ပြောကြလို့ ငါ့မိဘတွေ နဲ့အတူတူငါ့လိုက်သွားရတော့မယ်
အတန်းအတူတူငါ့တို့တတ်ခဲ့ရတယ် ခင်မင်ကြတယ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ငါဆိုးသမျှအနစ်နာခံဆက်ဆံတာနင်ပဲရှိခဲ့တာပါ ငါ့ဘဝမှာ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကနင်ပါပဲ မင်းမြတ် ရယ် အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတဲ့လား ခက်ခက်ရယ် ငါ့ချစ်နေတာမသိတာလား ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ခက်ခက်ရယ် လို့စိတ်ထဲပြောနေမိရင်း ငါနင့်ကို သတိရနေတော့မှာပါပဲ ခက်ခက်ရယ် ငါ့ကို နင်သတိရတဲ့အခါကို စာကိုပိုကျက်ပါနော် မင်းမြတ် ငါ့တို့ကံမကုန်ရင်ပြန်ဆုံအုံးမှာပါ မင်းမြတ်ရယ် စာသာကြိုးစားပါနော် ငါ့သွားတော့မယ် မင်းမြတ် ခက်ခက် လှည့်ထွက်သွားတော့မှ ခက်ခက် လို့အော်ခေါ်လိုက်တော့ ခက်ခက် မတ်တပ်ရပ်နေကြည့်နေတော့ ကျနော် ခက်ခက် အနားသို့ အပြေးလှမ်းသွားလိုက်ပြီး ခက်ခက် နဲ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင်ရပ်လိုက်ပြီး ကျနော်နဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံတော့ မင်းမြတ် နင်ဘာပြောမလို့လည်း ပြောလေ ခက်ခက် ငါပြောချင်တာထက် ငါတောင်းဆိုချင်တာပါဟာ နင်လက်ခံပေးပါလား ခက်ခက် မင်းမြတ် နင်နဲ့ငါ သူငယ်ချင်းအဖြစ်နေလာကြတာ ဒါပထမဆုံး နင့်ငါ့အပေါ်တောင်းဆိုတဲ့စကားပဲ ငါလက်ခံပါတယ် ပြောလေ မင်းမြတ် ငါ့ နင့် နဖူးလေးကို အမှတ်တရ အဖြစ် နှုတ်ဆက်အနမ်းလေး ပေးချင်ပါတယ် ခက်ခက် နင်လက်ခံပေးပါနော်
မျက်ရည်ဝေ့နေတဲ့ ကျနော် မျက်ဝန်းကို ခကခက် ကြည့်လိုက်ပြီး ခက်ခက် မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်ပြီးမျက်နှာကိုမော့ထားပေးပြီး ငါ့ ကို နမ်းပါ မင်းမြတ်လို့ ပြောတော့ ခက်ခက် ပါးနှစ်ဖက်ကို ကျနော် လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်လိုက်ပြီး ခက်ခက် နဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းရှိုက်ပြီး ကျနော် မျက်ရည်စက်တွေ ခက်ခက် နဖူးပေါ်ကြွေဆင်းသွားရင်း အနမ်းကိုရပ်လိုက်ပြီး ခက်ခက် ငါနင့်ကို အိမ်ပြန်လိုက်ပို့တော့ဘူးနော် ဒီနားလေးမှာငါရပ်နေချင်သေးလို့ပါ နင်ပြန်တော့နော် ခက်ခက် နင်ငိုနေတယ် နင်မငိုပါနဲ့ဟာ နင်ငိုနေတာ ငါ့ရင်ထဲမကောင်းဘူး မင်းမြတ် ရယ် လို့ ပြောပြီး ခက်ခက် မျက်ရည်တွေတပေါက်ပေါက် ကျဆင်းလာတော့တယ် နင်မငိုပါနဲ့တော့နော်ခက်ခက်ဆိုပြီး မျက်ရည်စတွေကိုသုတ်ပေးတော့ အဲဒါဆို နင်လည်းမငိုနဲ့ မင်းမြတ် နင်ငိုတာတွေ့တော့ငါလည်းငိုချင်တယ် ကျနော်မျက်ရည်ကို ခက်ခက် သုတ်ပေးလိုက်ပြီး မငိုနဲ့တော့နော် ငါ့တို့တစ်နေပြန်ဆုံမယ်လို့ငါယုံကြည်ထားတယ်နော်
ငါသွားတော့မယ်ဆိုပြီး လှည့်ထွက်သွားတဲ့ခက်ခက် နောက်ကျောကို ငေးကြည့်နေရင်း ကျနော် မျက်ရည်တွေ ထားမရဆီးမရ ပြိုဆင်းလာပါတော့တယ် ငါ့အချစ်ကိုနင်သိမြင်ပါစေ ခက်ခက်ရယ် စိတ်ထဲအကြိမ်ကြိမ်အော်ပြောနေမိတာ နင်ကြားပါ့မလားရယ် ခက်ခက်ရယ် ဟဲ့ သားလေး ဘာထိုင်လုပ်နေတာလည်း မှောင်တော့မယ် လန့်လိုက်တာ အမေရာ ဘာတွေတွေးနေတာလည်း သားရယ် မျက်ရည်တွေနဲ့ ဘာမှမတွေးပါဘူး အမေရယ် ဘာဖြစ်လို့မတွေးရမှာလည်း အမေကိုလာညာနေတယ် ငါမွေးတားတာငါသိတယ် နင်နော် ခက်ခက် ကိုသတိရပြီး မျက်ရည်ကျနေတာမလား သား မညာပါဘူး အမေ ဟုတ်ပါတယ် သား ခက်ခက်ကိုချစ်တယ် အမေရယ် သား ခက်ခက် ကို တတယ်ချစ်ရင် စာကြိုးစား ပိုက်ဆံစု ကြားလား အမေ လည်း ခက်ခက် ကို ချစ်ပါတယ် သဘောတူပါတယ် အမေ့သားလေး အချစ်မှန်ရင် ပြန်ဆုံမှာပါ
ကဲ အခုတော့ ထ ည၆နာရီထိုးတော့မယ် ရေချိုး သားအဖေ ထမင်းစားဖို့သားလေးကိုစောင့်နေတယ် ဟုတ်ကဲ့ အမေဆိုပြီး အမေနဲ့အတူတူ အိမ်ထဲဝင်လာပြီး ရေချိုးအဝတ်အစားလည်းပြီး ထမင်းစားခန်းထဲတော့ ခေါင်းရင်ဘက်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့ အဖေ က သား မင်းမြတ် ရေချိုးတာ နောက်ကျတယ်နော် နောက်နေ့ နောက်မကျစေနဲ့ ကြားလား ကျောင်းကိုမှန်မှန်တက် စာလည်းကြိုးစားအုံး မင်းမြတ် ဒီနှစ်ကျောင်းစတတ်ကတည်းက အဖေသတိထားမိနေတာ ပျှော်ပျှော်ရွှင်ရွှင်သိပ်မရှိဘူး ဘာဖြစ်နေတာလည်းမင်းမြတ် မင်းကတော့နော် တော်ပါပြီ ဖေကြီးရယ် ထမင်းစားပါတော့ ကလေးကိုသိပ်မပြောပါနဲ့တော့ ထမင်းစားတော့နော် ကဲဒီမှာက ဖေကြီးကြိုက်ဝက်သားဟင်း ကဲ သားလေးစား ထမင်း ဒါ က သားကြိုက်တဲ့ငါးခူးဟင်း ဆိုပြီး အမေ ခပ်တည့်ပေးတော့ ကျနော် ထမင်းစားလိုက်ပါတော့တယ်
အမေ နဲ့ အဖေ သားအခန်းထဲ စာကျက်လိုက်အုံးမယ်နော် အေးအေး သားလေး အေး သွားတော့ စာကျက်တော့ သား ရက်မှလပြောင်း စာမေးပွဲတွေပြီးလို့ ၁၀ တန်းအောင်စာရင်းထွက်တော့ကျနော် အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဆတ်တက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ အဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်လို့ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းနေရင်း အလုပ်ဆိုဒ်တွေကို ဖိလုပ်နေရင်း ပိုက်ဆံတော်တော် စုဆောင်းမိပြီးဘဏ်စာအုပ်ထဲငွေအမောက်တော်တော်များရှိလိုနေပါပြီ လုပ်ငန်းရှင် လူတန်းစားအစုံနဲ့ကျင်လည်နေရတော့ ကေတီဗီ မာဆတ် ကလပ် အရက် ဘီယာ တခါတလေ ပြည့်တန်ဆာနဲ့ပျှော်ပါးမိပါတယ် အလုပ်ကသင်လာတဲ့ပညာရပ်တွေပေါ့ဗျာ
အလိုက်အတိုက် ဆက်ဆံနေရတဲ့ ဘဝမို့ အလုပ်ထဲစိတ်နစ်နေရလို့ ရည်းစားထားဖို့အချိန်မရှိလို့ သွေးနဲ့သားနဲ့ ကျနော် လည်း ပြည့်တန်ဆာ ဖာသည်မတွေနဲ့ ပျှော်ပေမဲ့ အကာအကွယ်လေးနဲ့ ဆန္ဒတွေကို ဖြေလျှော့နေမိရင်း လက်ရှိကျနော်ဘဝလေးကို သာယာမှုအပြည့်နဲ့ဖြတ်သန်းနေမိရင်း အသက်၃၀နားနီးနေပါပြီ ရောက်လေရာ နေရာတိုင်း ခက်ခက်ကိုရှာနေရင်း လိုက်လေ ဝေးလေ ဖြစ်နေမိပါတယ် ခက်ခက် နင်ဘယ်ရောက်နေလည်း ငါ့နင်ကိုတွေ့ရင် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ် ငါစုထားတဲ့ပိုက်ဆံလေးနဲ့ အိမ်နဲ့ခြံဝယ်မယ် ငါ့တိုမိသားစုဘဝလေးတည်ဆောက်မြယ်လေ ငါနင့်ကို တွေ့ချင်တယ် နင်ကငါ့ရဲ့အချစ်ဦး အချစ်ဆုံးပါပဲ ခက်ခက်ရယ် မနက်လင်းလို့ အိပ်ယာထ လုပ်စရာရှိတာလုပ် မနက်စာ ကော်ဖီသောက်ပြီး ဆောက်လုပ်နေဆဲ အလုပ်ဆိုဒ်ထဲ လုပ်ငန်းခွင်ဝင် မှာစရာရှိတာ မှာပြီး ဗိုက်ကဆာသလိုဖြစ်လာလို့ အပြင်ပြန်ထွက် ထမင်းစားသောက်နေစဉ် ဖုန်းသံမြည်လာလို့ ကိုင်လိုက်ပြီး ဟယ်လို ကိုမင်းမြတ် ကျနော် အောင်မောင်းပါ ဟာ ကိုအောင်မောင်း ဘယ်ပျောက်နေတာလည်း အကို ဘယ်မှမပျောက်ပါဘူး မင်းမြတ် အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်
မင်းမြတ် စိတ်ဝင်စားလား ပုသိမ်မှာ အဆောက်အဦးတစ်လုံးဆောက်ဖို့ လက်ရာကောင်းတဲ့အဖွဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျနော်မိတ်ဆွေ အကူအညီတောင်းနေလို့ ကိုမင်းမြတ် ကိုအောင်မောင်း မလုပ်ဘူးလား ကျနော် လုပ်ချင်တာပေါ့ ကိုမင်းမြတ် ကျနော် မော်လမြိုင်ကျွန်း ရောက်နေတာ အလုပ်လက်ခံထားလို့ ဆောက်နေတုန်းဗျာ နောက်၆လလောက်မှ ပြီးမှာ ကျနော်မိတ်ဆွေကဒီလထဲ စပြီး ဆောက်ချင်နေလို့ အဆင်ပြေရင် ဈေးစကားပြောဖို့ ပုသိမ်ဆင်းလာမလား ကိုမင်းမြတ် လာခဲ့မယ် ကိုအောင်မောင်းလည်း ပုသိမ်ဆင်းလာလေ ဖုန်းနဲ့ထပ်ချိန်းကြတာပေါ့ အိုကေ ကိုမင်းမြတ် အလုပ်အဆင်ပြေရင်တော့ တခုခုတော့ လုပ်လိုက်တော့နော် ဟဲဟဲ လုပ်ပေးရတာပေါ့ ကိုအောင်မောင်း ဆီးယူ ဘိုင့်ဘိုင် ဖုန်းချသွားတော့မှ ကျသင့်ငွေရှင်းလိုက်ပြီး ဆိုဒ်ထဲမှာအပြန်မှာစရာရှိတာမှာပြီး မနက်ဖြန်ခရီးသွားဖို့လိုအပ်တာဝယ်ဖို့ အိမ်သို့အရင်ပြန်လိုက်တော့တယ် နောက်တစ်နေမနက်စောစော ပုသိမ် ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်ပြီး ကိုအောင်မောင်း ဆီဖုန်းဆက်ပြီး ဘီယာဆိုင်တဆိုင်မှာဆုံရန်ချိန်းဆိုလိုက်ကြပြီး ကဲ ဒါက ကျနော်ပြောနေတဲ့ ကိုမင်းမြတ် ပါ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် စကားမပြောခင် ချီးယားဆိုပြီး အသောက်အစားလုပ်ပြီး အဆောက်အဦးတည်ဆောက်ပုံနဲ့ ငွေကြေးစကားပြောဆိုလိုက်ပြီး ကဲဒါဆို အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ ဆိုတော့ ညကျ တစ်ပွဲဆုံကြတာပေါ့ ကိုကျော်ဝဏ္ဏနဲ့ ကိုမင်းမြတ် ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
ကိုအောင်မောင်း ကိုမင်းမြတ် တည်းဖို့ ကိုကျော်ဝဏ္ဏစီစဉ်ပေးတားတယ် လိုက်သွားလိုက် အနားယူလိုက်အုံး အားနာစရာပဲ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ ရပါတယ်ဗျာ ကိုအောင်မောင်း ဘော်ဒါဆိုတော့ ကျနော်လိုအပ်တာကူညီပေးရမှာပေါ့ဗျာ တည်းခိုခန်းလိုက်ပို့ပြီး ညနေမှဆုံမယ်ကိုမင်းမြတ် နေထိုင်စားစရိတ် ကျနော်ရှင်းဖို့ပြောပြီးသားနော် မလုပ်ပါနဲ့ ကိုကျော်ဝဏ္ဏ အားနာစရာဗျာ အားမနာနဲ့ ကိုမင်းမြတ် သွားပြီဗျာ ညနေ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် ပြောပြီး ထွက်သွားတော့တယ်ဗျာ တည်းခိုခန်းကအဆင့်မြင့်သားပဲ သပ်ရပ်မှုဝန်ဆောင်မှုကို ကြည့်ရင်သိသာပါတယ် ဒါ အကိုအခန်းပါ အကို ကျေးဇူးညီလေး ရော့ ဘောက်ဆူး ညီလေး ဧည့်ကြို ညီလေးက ပိုက်ဆံကိုယူလိုက်ပြီး ကျေးဇူးပါ အကို လို့ ပြောပြီး အကို နတ်သမီးလေးတွေ လိုအပ်သေးလား လိုအပ်ရင် ခပ်သန့်သန့်ခပ်ချောချောကျောင်းသူတစ်ယောက်ရှိတယ် အကို ကျောင်းစရိတ်ရှာနေတာပေါ့ ညဘက်အလုပ်လုပ်ပါဘူး စိတ်ဝင်စားရင်ဖုန်းဆက်ခေါ်ပေးမယ် ဈေးကတော့ သုံးသိန်းပါ အကို တည်းခိုခန်းကညီလေး စကားကြားလိုက်တော့ ကျနော်သားကြီးပေါင်ကြားကခေါင်းတောင်လာပါတော့တယ်
ခေါ်လိုက်ညီလေး ကျနော် လာပို့ပေးမယ် အကို အနားယူပြီးစောင့်နေပါပြောပြီး ထွက်သွားတော့ ကျနော် ရေချိုးခန်းဝင်ကိုယ်လက်သန့်စင်သွားတော့လန်းဆန်းသွားတော့ ကုတင်ပေါ်လှဲနေရင်းမှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားစဉ် ဒေါက် ဒေါက် လာပြီ လာပြီ ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီး တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ လှလိုက်တဲ့ကောင်မလေးတင်ရက်စရာမရှိဘူးဗျာ ကောင်မလေး အခန်းထဲဝင်သွားတော့ တည်းခိုခန်းကညီလေးကို ပိုက်ဆံတစ်သောင်း ထပ်ပေးလိုက်တယ် ကျေးဇူးပါ အကို ခွင့်ပြုပါအုံးနော် အကို အေး အေး ညီလေး အခန်းတံခါးပိတ်လိုက်ပြီး ပြန်ဝင်လာချိန် အကို နှင်း ရေအရင်ချိုးပါရစေနော် ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် ကြာတော့ သဘတ်ကို ပတ်ထားပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး ကျနော် ဘေးနားအိပ်ချလိုက်ပြီး အကို နှင်း လီးစုပ်ပေးမယ်နော် ဆိုပြီး အေးစက်နေတဲ့အခန်းထဲမှာ ပက်လက်အိပ်နေပြီး ကျနော်ပေါင်ကြားမှာ နှင်းထိုင်ချလိုက်ပြီး ခါးကိုကိုင်းလိုက်ပြီး ကျနော် လီးကိုလက်နဲ့ကိုင်လိုက်ပြီး နှုးညံ့တဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးနဲ့ လီးထိပ်ကိုငုံစုပ်လိုက်စဉ် အိစက်တဲ့အထိတွေ့ အာငွေ့နွေးနွေးလေးနဲ့စုပ်ချက် ကျနော် မူးမေ့မတတ်အတွေ့ထူးလို့ နှင်း ဆံပင်လေးတွေကိုလက်နဲ့ထိုးဖွကစားနေမိပါတယ်
ကောင်းလိုက်တာ နှင်းလေးရယ် စုပ်ချက် လျှာကစားချက်တွေက လူကို ဒူးပါမခိုင်လောက်အောင် ကောင်းလိုက်တာဗျာ နှင်း တော့ပါတော့နော် ပြောမှ လီးစုပ်ပေးနေတာကိုအရှိန်သတ်လိုက်ပြီး ကျနော်ကိုနှင်း ကြည့်ပြီး အကို လိုးချင်ရင်လိုးတော့နော် နှင်း ဘယ်လိုနေပေးရမလည်း အကိုပြောနော် လို့စကားဆိုတော့ ကျနော် နှင်းကိုကြည့်ပြီး အကို နှင်း အဖုတ်ကိုယက်ချင်တယ် အကို မလုပ်ပါနဲ့ နှင်း ဘဝကပေါ့ပျက်ပျက်မိန်းမဘဝပါ မလုပ်ပါနဲ့ အကို အကို နှင်းကို မြင်မြင်ချင်းသံယောဇဉ်ဖြစ်မိတယ် နှင်းကို အကိုစိတ်သန့်တယ် အကို နှင်းအဖုတ် ကိုယက်ပါရစေနော် အကိုစိတ်သန့်တယ်ဆိုရင် နှင်းအဖုတ်ကို ယက်ပါ အကို ခွင့်ပြုပါတယ်နော် နှင်း ဘယ်လိုနေပေးရမလည်း အကို နှင်း ပက်လက်အိပ်လိုက်နော်လို့ပြောပြီး ကျနော် ထ လိုက်ပြီး နှင်းကိုယ်ပေါ်မှောက်ချလိုက်ပြီး နှင်းခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်တော့တယ်
ပြွတ် ပြွတ် ထိုနောက် နှင်း ရဲ့ နို့သီးခေါင်း သေးသေးလေးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်နေရင်း ကျန်နို့တစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညစ်ကစားနေတော့ အင်းး… အကိုရယ် အင်းး… ကျနော် အောက်ဘက်ကိုမသိမသာလျှောဆင်းပြီး ဗိုက်သားလေးကိုနမ်းလိုက်ပြီး အောက်ကိုထပ်ဆင်းလိုက်ပြီး နှင်း စောက်ဖုတ်နား မျက်နှာအပ်ထားပြီး အနီရောင်ဖျော့ဖျော့ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားအနည်းငယ်လန့်နေပေမယ့် စောက်ဖုတ်ကစေ့ကပ်နေတုန်းပါပဲဗျာ လှလိုက်တဲ့ အဖုတ်ပဲနှင်းရယ်လို့ဆိုပြီး ကျနော်လျှာကိုနှင်းအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လို့ စ ယက်ပေးလိုက်စဉ် အ အကိုဆိုပြီး ကျနော် ဆံပင်ကို နှင်းတစ်ယောက် ဖွကစားနေပါတော့တယ် ကျနော် စောက်ဖုတ်လေးကို ယက်လိုက် စောက်စိလေးကို စုပ်စုပ်ပေးလိုက်တော့ နှင်း ဖင်လေးကော့ကော့လာပြီး အ အား ရှီး အီး အီးး… အကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ အိုး အ အင်း…ဟင်းးးးး အကို အ အီးးး…အင်း…ဟင်းးး… ကောင်းလိုက်တာ အကိုရယ် ဟူးးး…အ အားး.. တော်ပါတော့ အကို အကို တော်ပါတော့ ရပ်ပါတော့ အ အကို နှင်းကိုလိုးပေးပါတော့ လိုးပါတော့ နော် နော် အကို အား.. အီးး… ကော့ပျံနေပါတော့တယ်ဗျာ ကျနော် စောက်ဖုတ်ကိုယက်စုပ်နေတာရပ်လိုက်ပြီး နှင်း အပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး လီးကို နှင်းစောက်ဖုတ်ထဲ ညင်သာစွာလိုးသွင်းထည့်ပြီး ကြင်နာစိတ်ဝင်လာမိပြီး ဖြေးဖြေးခြင်းလိုးညှောင့်နေမိပါစဉ် အ အားး.. အကို ကောင်းလိုက်တာ လိုးတတ်လိုက်တာ အကိုရာ
အီးး….. ဟူးး.. ဟင်းး.. ညင်သာတိုးတိတ်စွာသဲ့သဲ့လေး ညီးနေရှာပါတယ် ဖြေး၂မှန်၂ တချက်ချင်းလိုးနေတာ ၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ နှင်း ရယ် ကောင်းလိုက်တာ အ အား ကောင်းလိုက်တဲ့အဖုတ်ပဲ နှင်း ရယ် ဟူးးးး… ပြွတ် ပြွတ် ဇိ ဇိ ဖတ် ဖတ် ပြွတ်ပြွတ် လိုးနေရင်း နှင်း အကို ကို အပေါ်ကစောင့်ပေးပါလား အ အ အား အီး ဟုတ်ကဲ့ အကို ကျနော်လီးကိုအဖုတ်ထဲက ထုက်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်ပက်လက်နေလိုက်ပြီး နှင်း ကျနော်လီးကိုကိုင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကိုတေ့တားပြီး ထိုင်ချလိုက်ပြီး အ လို့ ထချက်အော်ပြီး ကျနော်ကိုပေါ်မှောက်ချလိုက်ပြီး ကျနော် နှင်းကိုဖတ်လိုက်မိစဉ် နှင်း ကျနော် ကျနော်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ပြီး ခါးအောက်ပြီး ကစားပြီး တဖတ်ဖတ်နဲ့ ဆောင့်ဆောင့်ပေးနေပါတော့တယ် ဖတ် ဖတ် ဖတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဆောင့်နေတာ ကောင်းလွန်းလို့ အော်ချင်သလို ညီးချင်သလိုဖြစ်နေလောက်စေးကျပ်နေပေမဲ့လည်း နှင်းက ပါးစပ်ကိုစုပ်စုပ်နမ်းရင်းဆောင့်ပေးနေတာမိုး အု အု လိုသာ အော်သံကျနော်ဖြစ်နေပါတော့ဗျာ ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်း နှင်းဆောင့်ချက်ကြမ်းကြမ်းလာလို့ ကျနော် နှင်းနမ်းနေတဲ့ပါးစပ်ကရုန်းလွတ်သွားပြီး
အား ဟင်း အား အား နှင်း ကောင်လိုက်တာ နှင်း အ အားး…. ဆေင့်တာ မရပ်ဘူးဗျာ ဖန်းဖန်း ဖတ်ဖတ် ဖန်းဖန်း အ အားအားး..အီးး..အကိုအကို အီးးး… အားး.. နှင်းး ပြီးး ပြီးး နှင်းး နှင်းး အား အ အားးးးး အကို ပြီးး ပြီးး ပြီးးတော့မယ် ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်းပြွတ်ပြွတ် ဖတ်ဖတ် ဖန်းဖန်း အသံတွေညံ့စီပြီးးး…. ကျနော်လည်း နှင်းစောက်ဖုတ်ကော့ကော့ဆောင့်နေရင်းး အားး.. နှင်းကလည်းဖိဖိဆောင့် ဆောင့်ထည့်နေရင်းးး.. အားးးးး အားး.. အကို ပြီးးး.. ထွက်ပြီးး.. အား.. အားး.. နှင်းး ပြီးး ပြီးးအီးး… ပြိုင်တူအော်ညီးမိပြီးးး… ကုတင်ပေါ်ဖတ်လျှက် ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ် အဖုတ်ထဲလီးမချွတ်သေးဘဲ အရည်တွေ စိမ့်စိမ့်ဆင်းလို့ အိပ်ယာခင်းပေါ်အချစ်မျက်ရည်ခပ်ပြစ်ပြစ်ပြိုဆင်းလို့စိုရွဲကုန်ပါတော့တယ်ဗျာ အမောပြေတော့မှ နှင်းအပေါ်ကဆင်းပြီး ဘေးမှာအိပ်နေတော့ ကျနော်ဖတ်ထားပြီး နှင်း ဟုတ်ကဲ့အကိုပြောလေ နှင်းကို အကိုချစ်မိနေပြီ နှင်းဘဝကိုအပိုင်လိုချင်တယ် လက်ထပ်ခွင့်ပြုပါ နှင်း အကို တကယ်ပြောနေတာလား လာမနောက်ပါနဲ့အကို အကို တကယ်ပြောတာပါ သေချာလို့လားအကို နှင်းအကြောင်း အကို သိပြီးမှဆုံးဖြတ်ပါ အခုလောလောဆယ် နှင်းအကာအကွယ်မပါပဲအလိုးခံတာ ဒါပထမဆုံးပါပဲ အကို
အကိုလိုကြင်နာစွာနှင်းအပေါ်ဆက်ဆံခံဖူးတာ ဒါပထမဆုံးပါပဲ အကို အကိုနာမည်က အကို နာမည် က ကိုမင်းမြတ်ပါ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်လုပ်ပါတယ် ပုသိမ်ကို အလုပ်နဲ့လာတာပါ နောက်တပတ်ဆို ပုသိမ်မှာ၆လလောက် အလုပ်နဲ့လာနေရမှာ နှင်း နှင်း အကိုကို အကာကွယ်မဲ့ဆက်ဆံတာပထမဆုံးဟုတ်လား နှင်း နှင်းမညာတတ်ပါဘူး အကို နှင်းကိုချစ်တယ် လက်ထပ်မယ် ပြောတော့ အကိုမှာရည်းစားမရှိဘူးလား အကိုမှာ ရည်းစား မရှိပါဘူးနှင်း အကိုကျောင်းသားဘဝကချစ်ခဲ့တဲ့ချစ်ဦးသူတစ်ယောက်တော့ရှိပါတယ် နှင်း ဒါပေမဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ဖွင့်ပြောခွင့်မရခဲ့ပါဘူး နှင်း ဒါပေမဲ့ အကိုနှင်းကို သံယောဇဉ်ဖြစ်တယ် နှင်းဘဝကို စောင့်ရှောက်ချင်တယ် နှင်းဘဝကို အကိုနားလည်ပေးပါတယ် အကိုနှင်းပြောတာ နားတောင်ပေးအုံးနော် အင်းးး.. နှင်း မိဘတွေမရှိတော့လို့ နှင်း ဦးလေးနဲ့အဒေါ်အိမ်မှာနေခဲ့ရတယ် ဝမ်းကွဲအမတစ်ယောက်လည်းရှိပါတယ် နှင်းအပေါ် အားလုံးက သမီးတစ်ယောက်လို ပြုစုပျိုးတောင်ပေးလို့ ၁၀တန်းအောင်တယ် နှင်း၁၀တန်းအောင်တဲ့နှစ်မှာပဲ ရပ်ကွက်ထဲမီးလောင်လို့ နှင်းတို့ နေတဲ့အိမ်ပါ မီးထဲပါသွားတယ် စုဆောင်းထားသမျှ ကုန်သွားတယ်
ဦးလေးနဲ့အဒေါ်စိတ်ဆင်းရဲပြီးစိတ်တောင်းကိုယ်ကြေလို့ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆုံးပါးသွားတော့ အမနဲ့နှင်းလည်း နောက်ဆုံးမနေချင်တော့တာနဲ့ အမ ကရှိတဲ့ ခြံကိုရောင်းပြီး ပုသိမ်ကိုပြောင်းလာခဲ့တာပါ အကို အမ က နှင်းကို အရောင်းအဝယ်ပွဲစား ငွေတိုးလေးနည်းနည်းပေးပြီး နှင်းကိုကျောင်းထားပေးလာခဲ့တာပါ အကို ခံစားချက်တွေမျိုသိပ်ကြိတ်မှိတ်ပြီး နေနေလာတဲ့ အမ နှင်း ဒုတိယနှစ်စီးပွားရေးကျောင်းစတတ်တော့ နှလုံးရောဂါက အမ ကိုအိပ်ယာထဲလှဲသွားလောက်အနိုင်ယူသွားတယ်အကို အမ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ စားစရိတ်ဆေးစရိတ်ကျောင်းစရိတ်ရအောင်ကြံရာမရတဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ထဲက တည်းခိုခန်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အောင်လေးကို အကူအညီတောင်းပြီး ဒီလောကထဲကိုနှင်းရောက်လာတာပါ အကို တလကိုသုံးရက်နှင်းဘဝကမ္ဘာပျက်လုမတတ်ခံစားငိုကြွေးပြီး အမကျေးဇူးတွေကို အရှက်နဲ့နှင်းဘဝပြန်ဆပ်နေတာပါအကို
ဟီးး…. ဟီးးး… ဟင့် ဟင့် ဟင့် နှင်းတစ်ယောက်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျအောင် ငိုကြွေးနေသောနှင်းကို နွေးထွေးမှုနဲ့ကြင်နာစွာဖတ်ထားမိပြီး ငိုလိုက်ပါ ဝအောင်ငိုလိုက်ပါ နှင်း နောက်နေ့ကစပြီး နှင်း ကျမဲ့မျက်ရည်နေရာမှာ ပျှော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်စေရမယ်လို့ အကိုကတိပေးပါတယ် အကိုနှင်းကိုချစ်တယ် လက်ထပ်မယ်နှင်း အကိုကို့ချစ်လား ဖြေပါ နှင်း နှင်းဘဝကိုနားလည်မှုပေးတဲ့ အကို့ကိုနှင်းသိပ်ချစ်ပါတယ် အကိုရယ် သြော်နှင်းလေးရယ် ကလေးရယ် အပြန် နှင်းကို ကျနော် လိုက်ပို့ပေးတော့ အကိုကားရပ်တော့ ကားရပ်လိုက်တော့ အိမ်တော့ မလာနဲ့အုံးနော် အကို နှင်း လက်ထပ်ဖို့ အမ ကိုအရင်ပြောအုံးမယ် အမ ခွင့်ပြုမှ အကို အိမ်လာလည်နော် ဟိုးမှာ မြင်နေရတဲ့အိမ်က နှင်းတို့အိမ်နော် အကို မှတ်ထားနော် ဟုတ်ပါပြီ နှင်းရယ် တာ့တာ အကို ဆိုပြီး ကားပေါ်ကဆင်းမယ်လုပ်တော့ နှင်း ခဏလေး ဘာလဲအကို ရော့ နှင်းသုံးဖို့ ကျနော် ငွေ ၈ သိန်းပေးတော့ မယူပါရစေနဲ့အကို မဟုတ်သေးဘူးနှင်း နှင်း ဘဝဟောင်းကိုမေ့လိုက်တော့ အကိုတို့ တနေ့လက်ထပ်မဲ့သူတွေလေ ပိုက်ဆံကနှင်းကျောင်းထက်ဖို့ အိမ်စရိတ် နှင်း အမ ဆေးဖိုး လိုတယ်လေ နောက်အပတ် အကို ပုသိမ်ကိုပြန်လာမယ် အလုပ်နဲ့ ပိုက်ဆံကုန်ရင် ဖုန်းဆက် ဘာမှမလုပ်ရဘူးနော် ကြားထဲလည်း အကိုဖုန်းဆက်နေမှာပဲ နောက်တခေါက် အကိုလာလို့ အမ သဘောတူရင် အကိုတို့လက်ထပ်ကြမယ်နော် နှင်း နှင်းပျှော်လိုက်တာ အကို နှင်းဘဝကို အရိပ်အမိုးလို့ကာကွယ်ပေးလို့ နှင်းအကို့ကိုသိပ်ချစ်သွားပြီ အကို တကယ်ပြောတာပါ အကိုယုံကြည်ပေးပါနော် အကြွင်းမဲ့ ယုံပါတယ် နှင်း….
ကျနော် နှင်းပိုက်ဆံအိတ်ထဲငွေထည့်ပေးလိုက်ရင်း အကို နှင်း သွားတော့မယ် တာ့တာ ဆိုပြီး ကားပေါ်ကဆင်းသွားတော့ ကျနော် ကားကိုလှည့်ပြီး တည်းခိုခန်းသို့ပြန်ခဲ့မိတယ်ဗျာ ကျနော်နဲ့နှင်း ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရှိနေရင်းနဲ့ အမ ကလက်ထပ်ဖို့သဘောတူကြောင်း နှင်းကပြောတော့ မိုးမမြင်လေမမြင် ပျှော်နေမိတာ ကျနော် တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ ပုသိမ်က အလုပ်စအကောင်အထည်ဖေါ်တော့ နှင်းလာလည်တယ် ဆိုဒ်ထဲကို ဆိုင်ထိုင် ဘုရားသွား လိုရမယ်ရဆိုပြီး နှင်းကိုငွေပေးတော့ မယူဘူးအကို ငွေရှိနေသေးတယ်လေ ယူထားနှင်း အကို နှင်းကိုဘာကြောင့်နဲ့မှအားမငယ်စေချင်ဘူး ယူထားလိုက်နှင်း အကိုရယ် ဆိုပြီးရင်ခွင်ထဲဝင်လာတော့ကြင်နာစွာနဖူးလေးကိုနမ်းလိုက်မိတယ်ဗျာ ဖုန်းနဲ့သာ စကားပြောဖြစ်နေကြပြီး အရေးကြီးနေတဲ့အပိုင်းရောက်နေလို့ ဆိုဒ်ထဲကနေအပြန်ကို မရောက်ဖြစ်လို့ နှင်းနဲ့ မတွေ့ဖြစ်သေးပါဘူး နှင်းလည်းကျောင်းပြန်တတ်နေတော့ မအားလို့မတွေ့ဖြစ်ကြဘူးဗျာ နောက်တနေ့ ၇ နာရီလောက် ကျနော်လုပ်ငန်းခွင်ရင် ငှားနေတဲ့အိမ်မှကားမောင်းထွက်လာစဉ် ဖုန်းသံမြည်လာလို့ စကားပြောဖို့ကိုင်ကြည့်မိတော့ အော် နှင်းဆက်တာပဲ ဟယ်လို နှင်း အကို အကို အိမ်လာခဲ့ပါအုံး အမ အမောတော်တော်ဖောက်နေပြီ မြန်မြန်လာပါအုံး
တူ တူ တူ ဖုန်းချသွားပြီ ကျနော် နှင်း အိမ်ပေါ်သို့ ထက်သွားလိုက်ပြီး နှင်းရဲ့စကားသံအရင်ကြားလိုက်တယ် အမ အမ ဆေးရုံသွားရအောင်နော် အမ မသွားတော့ဘူးနှင်း အမ သိနေတယ် မသွားးးးတော့ဘူးးးးးး အကို လာပါအုံး အကို လုပ်ပါအုံး ကျနော် နှင်းအနားထိုင်ချလိုက်တော့ ခက်ခက် ခက်ခက် သူငယ်ချင်း ခက်ခက် ခက်ခက် ဆေးရုံသွားကြမယ်နော် သူငယ်ချင်း မင်းးး.. မြတ် မင်း..မြတ် ငါ့နင့်ကိုဒီတသက်မတွေ့ရတော့ဘူးး လို့ထင်နေတာဟာ အင်းးးးး ငါ့တို့ကံမကုန်သေးလို့ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ မင်းးးးးမြတ် နင် မောနေပါ့မယ် ခက်ခက် နင်ဖြစ်ချင်တာပြော ငါအကုန်လုပ်ပေးမယ် ခက်ခက် နင် ဘာလုပ်ချင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ ခက်ခက် ပြောဟာ အခုလိုမြင်လိုက်ရတာ ငါ့ရင်ထဲကမ္ဘာပျက်နေသလိုပဲ ခက်ခက် ခက်ခက် နှင်းကို မော့ကြည့်လိုက်ပြီး ဒါ ညီမလေး လက်ထပ်မယ့်သူလား နှင်းးးးညီမလေးး ဟုတ်ပါတယ် မမ ဟုတ်ပါတယ် မင်းးးးမြတ် သူငယ်ချင်း နင်နဲ့ဆို ငါ့ညီမလေးးးးနှင်းကို ပိုစိတ်ချပါတယ်ဆိုပြီး ကျနော်လက်တစ်ဖက်နဲ့ နှင်းလက်တစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီး ခက်ခက် သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီး လက်ထပ်ပေးလိုက်ပြီး ငါ့ ညီမလေးနှင်းကိုငါ့ကိုယ်စား စောင့်ရှောက်ပေးပါဟာ နှင်းတစ်ယောက်မျက်ရည်တွေစီးကျနေပါပြီ အသံမတွတ်ပဲရှိုက်ငိုနေပါပြီ
မင်းး မြတ် ငါ့အိမ်ပြောင်းနယ်ပြောင်းနေရတော့မယ် ၉တန်းအောင်စာရင်းထွက်တော့ ငါ့ပြောတုန်းက နင့်ငါ့နဖူးကိုနမ်းခဲ့တယ်နော် မှတ်မိလား မင်းးးးမြတ် ငါ့မှတ်မိနေတုန်းပါပဲ ခက်ခက်ရယ် ငါ့ အနားတိုးလာပေးပါ မင်းးးးးမြတ် ငါ နင့်နဖူးကိုနမ်းချင်လို့သူငယ်ချင်းးးးးးးးနှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပါ မင်းးးမြတ် ရယ် နှင်းတစ်ယောက် စို့နစ်စွာ ငိုနေပါပြီ ကျနော်လည်း မျက်ရည်မိုးတွေပြိုဆင်းနေပါပြီ အိပ်ယာပေါ်လှဲနေတဲ့ ခက်ခက် မျက်နှာအနား ကျနော် မျက်နှာငုံပေးလိုက်စဉ် ခက်ခက် ကျနော်ကို သေချာကြည့်နေပြီး အသက်ရှုသံခပ်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေပြီးးး ငါ့နင့်ကို တနေ့မှ မေ့မရဘူး မင်းးးးး မြတ် ဆိုပြီးးးးးး အားယူကာ ခက်ခက် ကျနော် နဖူးကိုနမ်းလိုက်ပြီးးး ခေါင်းအုံးထက် ပြိုလဲကာကျသွားပါတော့တယ် ခကခြကြ ခကခြကြ သူငယခြင်းး ငါလည်း နင့်ကို တနေ့မှမေ့မရခဲ့ပါဘူးး ခက်ခက် မမ မမ မမ မမ မမ မမ မမ မမ နှင်းကိုထားသွားပီလားးး မမ မမ မမ မမ တကယ်ထားသွားပီလားးးးးး မမ မျက်ရည်စတွေနဲ့ငိုချင်းရှိုက်လို့ တကယ်ထားသွားပြီးလားး ခက်ခက်ရယ် နင့်ကိုငါမျှော်လင်ခဲ့ရတာ ခက်ခက်ရယ် ငါသိပ်ချစ်ခဲ့ရတာ နင်သိသွားလောက်ပါရဲ့စိတ်ထဲငိုကြွေးပြောနေမိရင်းးးး ခက်ခက်ရယ် နင့်ကိုငါချစ်ခဲ့ပေမယ် ငါ့နှလုံးသားကိုကြက်ခြေခတ်အလွမ်းတွေနင်ပေးခဲ့ပြီးးးး ဆုံတွေ့ချိန်မှ လွမ်းရပ်ရာသီ တေးသီကျူးဖို့ အလွမ်းဇာတ်လေး နင်ပေးခဲ့တာလားးး ခက်ခက်ရယ် ။ပြီးးး…ခရပ်ဒစ်-မူရင်းရေးသားသူ